Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka ajende Memory Card
Ajende xasuusta xaaladood khasaaro sawir card
Sidee inuu ka soo kabsado sawiro ka kaadhka xusuusta ajende
1 ajende xaaladood khasaaro sawir kaadhka xusuusta
Tirtirka ah Shil of photos - tirtirka ah Shil of sawir iyo video files ka kaadhka xusuusta ajende lagaga xayuubiyay xogta
Formatting Shil of kaadhka xusuusta - Waxaad qaab laga yaabaa in kaadhka xusuusta aad si qalad ah taas oo keenta in khasaaro xogta
Khaladaadka halka wareejinta Files - Files yaanay ka hallaabin ka kaadhka xusuusta iyagoo u wareejiyo si qalab kale ama ay sabab u kaca ah awoodda ay taasi dhacdo inta lagu jiro hawlgalka kala iibsiga
Jiidaya kadis ka mid ah kaadhka xusuusta - bixitaanka kaadhka xusuusta ajende ka kombiyuutarka keeni kartaa nidaamka file musuqmaasuqa oo keentay in khasaare xogta
Dabcan, waxaa kale oo jira sababo kale oo aan la garanayn oo keeni kara xogta aad ku kaydsan on kaadhka xusuusta ajende laga badiyay, sida weerarkii virus, awood failure camera, iwm wax kasta oo nooc ka mid ah Haddii aad ka aragnay, kaliya dego iyo sii xasuusta ajende aad card si fiican. Weli waxaa jirta hab aad aan dib ugu heli sawiradaada - Ladnaansho sawiro ka kaadhka xusuusta ajende la software soo kabashada.
Si loo kordhiyo kabashada aad sawiro lumay on kaadhka xusuusta ajende, waa in aad joojiso isticmaalka waxa ay si degdeg ah ka dib markii uu shilka. Dibna kaarka overwrite doonaa sawiro hore oo waxaan ka dhigi unrecoverable. Tani waa muhiim. Markaas ka heli qalab kabashada sawir dib u soo ceshano sawiro ka kaadhka xusuusta ajende ugu dhaqso badan.
2 Sidee inuu ka soo kabsado sawiro ka kaadhka xusuusta ajende
Hel barnaamijka sawir kaadhka xusuusta ajende ah: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac .
Download version maxkamad free of ajende kaadhka xusuusta kabashada sawir software ka hooseeya hadda. Dooro version saxda ah ee nidaamka. Next, aynu wada isku day version Windows ah.
Labada kabashada software sawir waa aamin iyo xirfadeed. Waxaad u isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado dhan lumay photos, video iyo maqal ah ka kaadhka xusuusta ajende in 3 tallaabo. Next, aynu isku dayi ajende kaadhka xusuusta kabashada sawir shaqada la version Windows ah.
Step1 Connect kaadhka xusuusta ajende si aad u computer ah
First of dhan, xiriiriyaan kaadhka xusuusta ajende in kombiyuutarka meesha aad xasuusta ajende software kabashada sawir kaadhka la geliyo. Markaas aan bilowno barnaamij oo guji "Start" si ay u bilaabaan shaqada dib u soo kabashada.
Step2 Scan sawiro laga badiyay aad kaadhka xusuusta ajende
Next, aad arki doonaa in aad kaadhka xusuusta ajende la ogaado sida warqad drive barnaamijka a. Dooro iyo "Sawirka" waa sawiro laga badiyay, video iyo files audio.
Step3 sawirada kulanka xiisaha iyo soo kabsado on kaadhka xusuusta ajende
Scan ka dib, waxaad kulanka xiisaha leh kartaa mid ka helay sawiro by mid ka mid ah si uu u hubiyo tayada. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto iyo waxaan iyaga ku badbaadin on your computer la mid click on "Ladnaansho".
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad kaadhka xusuusta ajende asalka ah. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka ajende SD Card
SanDisk Recovery Software: Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka SanDisk
Sida loo soo ceshano emails tirtiray
Fariimaha qoraalka Undelete ka Android Phones
Acer Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Acer Hard Drive
Easy Hagaha Lexar JumpDrive Triton Recovery
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Nokia N97
3 Talaabada inuu ka soo kabsado Photos ka Camera Olympus
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka ajende Memory Card